Uyilo lweMveliso (DFM) yeNkonzo-eKingford
Yeyiphi engcono kwi-DFM ye-PCB ngokuchasene ne-PCB DFA?
Luxanduva lwe Ukuveliswa kwePCBInkonzo yokuyila ii-PCB zakho ngendlela efanelekileyo. Indlela enokuthi inciphise ngayo iindleko zizonke kunye nayo yonke eminye imiba ebalulekileyo ye-DFM. Ngenxa yoko, konke oku kunokwenzeka ngokukhetha okwaneleyo Uyilo PCB inkonzo egqibeleleyo Uhlalutyo lwePCB DFM.
Lonke uphando lubonisa ukuba i-70-80% yemveliso yokuvelisa kunye nomgangatho woyilo lwakho lufezekisa kuphela kuyilo, hayi kwimveliso. Ngaphaya koko, ukufumana nokulungisa iimpazamo zoyilo zokuqala kunokuba kubiza kakhulu kunye nokuchitha ixesha.
Umyili okanye umenzi unokwenza i-PCB esemgangathweni ngokomgangatho kunye nexabiso ngokulandela izikhokelo ze-DFM rhoqo. Inkonzo yethu ye-PCB DFM yengcali kwaye inokubonelela,
● Izixhobo ze-PCB DFM ezinokuthi zenze kube lula ukuyila kwe-PCB yakho;
● Olona vavanyo lwe-DFM lwePCB kunye nokujonga ukulawula zonke iintlobo zemicimbi ye-DFM.
Eyethu Uhlalutyo lwePCB DFM Inkonzo nayo inokuchonga yonke imiba yoyilo lwe-PCB ngokukhawuleza nangokuqhubekekayo. Inkonzo yethu eyongezelelweyo ye-PCB DFM ilunge kakhulu onokuthembela kuyo yonke imiba yakho ye-DFM. Kananjalo i-PCB yakho ebalulekileyo iyakha kunye neemfuno zoomatshini.
Yintoni i Uhlalutyo lwePCB DFM inkonzo?
Ukuba siyijonga ngokona kubanzi, ke i-DFM ithetha uyilo lweMveliso. Ngapha koko, i-DFM ikwabhekisele kuYilo lweMveliso. Ngokusisiseko, yinkqubo ekhethekileyo yokuyila iimveliso ngokuqhubayo kunye nenjongo yokuphucula onke amanqaku okuvelisa.
Ngapha koko, kuyo, umntu unokuphucula neendlela zokubumba ngenaliti ngokusebenzisa iitsheki ze-DFM kunye neemvavanyo. Ngokwenyani, siseti ethile yezikhokelo zoyilo ezinceda abavelisi ukuba baqiniseke ukuba ukwenziwa kweebhodi zePCB.
Yinkqubo ebaluleke kakhulu enceda ukunqanda imiba eliqela kwinqanaba lokugqibela lemveliso yePCB. Ngapha koko, okusemandleni ethuUhlalutyo lwePCB DFM inkonzo inokukunceda phucula yonke yakho Uyilo lwePCB uhlobo ukuba ufuna ukufumana kuphela okokuqala ukwakha spin.
I-PCB DFM vs. I-PCB DFA
Zombini i-PCB DFM kunye ne-DFA zibalulekile ukuyila iibhodi zakho zePCB. Banokubaluleka kunye neenqobo zabo zokuyila uyilo olufanelekileyo lwePCB.
● I-DFM yinkqubo yokuququzelela zonke iiplani ze-PCB ukuze kulungiswe imiba ye-DFM
● Imiba enokuthi yenzeke ngexesha lokuqamba kwePCB kunye Indibano PCB
● Ngapha koko, ikwaxhasa ukuphindwaphindwa okuninzi kuyilo lwe-PCB
● Kodwa iyanceda abayili kuphela kumanqanaba okuqala emveliso
● Ngapha koko, yonke imiba ye-DFM inxulumene nejometri ye-PCB
Le micimbi ihlala ingabonakali ngexesha lokujonga i-DFM
● Iinkampani zihlala zisebenzisa isoftware ethile ye-DFM ukuyifumana ngokufanelekileyo
● Ngokusisiseko, i-DFA sisixhobo esiluncedo esisetyenziswa ngabavelisi ukukhetha eyona nto ibalulekileyo
● Bakhetha eyona nkqubo ifanelekileyo yokuyila iimveliso zabo
● I-DFA imele uyilo lwe-PCB yeNdibano
● Kubaluleke kakhulu kwii-OEMs
● I-DFA iyanceda ngokwenene ukunciphisa umjikelo wemveliso
● Ikwanokunciphisa iindleko zophuhliso
● Ukuqhubela phambili, i-DFA ikwaqinisekisa ngezona ziphumo zibalaseleyo zemveliso kwanakwinqanaba leprototype
Njani Uhlalutyo lwePCB DFM iluncedo?
Uhlalutyo lwePCB DFM iluncedo kakhulu ekukuphepheni ekuchitheni ixesha lakho kunye nemali. Kuba ilungiselela zonke iimpazamo kwicandelo lobunjineli kunye nemveliso kwinqanaba loyilo lwakwangoko.
Ngaphaya koko, i-DFM ikwakhokela ekuthinteleni ukusebenza kwakhona okunendleko njengoko ichonga kwaye isombulula yonke imicimbi ngaphambi kokugqibela kokuvelisa. Iinjineli zohlalutyo lwe-DFM zifumana uqeqesho olukhethekileyo lwenaliti yokubumba. Ke, banakho ukugcina ixesha kunye nemali yakho exabisekileyo ngokumisela:
Ukusebenza kwexabiso elinokunciphisa iindleko ngenxalenye nganye
➢ ukusebenza kwiimveliso eziphucula umgangatho wamalungu kunye nenkqubo
Izisombululo kunye nemiba enokubakho yenxalenye yokubumba ngexesha lesigaba sokuyilwa
Ulungiso loyilo olukhethekileyo lweenxalenye zokuhambisa izixhobo ngokukhawuleza.
Ngapha koko, Uhlalutyo lwePCB DFM ikwachonga awona mathuba mahle okwenza izinto ezifanelekileyo endaweni yazo.
Kubalulekile Uhlalutyo lwePCB DFM izixhobo kuyilo PCB lula
Kuba ukuyila ogqibeleleyo ngokulula, kubaluleke kakhulu ukuba ukhethe izixhobo ekunene. Ngapha koko, ngaphambi kokuqala kowokugqibela Ukuveliswa kwePCB Inkqubo, kuya kufuneka uthathele ingqalelo yonke imiba ebalulekileyo. Le micimbi inokuchaphazela indleko, umgangatho, ukusebenza kweebhodi zakho zePCB.
Kuba zonke ezi zixhobo zinceda ukuphucula inqanaba lokuveliswa kuyilo lwe-PCB. Ke, soloko ukhetha inqanaba lokuvelisa elichanekileyo kuyilo. Ngalo lonke ixesha zama ukuxoxa ngokunzulu ngazo zonke izixhobo ezibalulekileyo ezinokuchaphazela iziphumo zakho zoyilo lokugqibela lwe-PCB.
Ezinye izixhobo ezibaluleke kakhulu zezi:
● Ukujonga uyilo PCB yakho for nokumelana;
● soloko uvavanya ngokunzulu iziphumo ezingachanekanga;
● zama ukusebenzisa iiphakheji ezahlukeneyo ze-CAD yoyilo lwakho lwePCB eyahlukeneyo;
● soloko unika ukubaluleka okukhulu kwizenzo ezenziwayo xa kuthelekiswa nokufunda ithiyori
Ngapha koko, kuya kufuneka usoloko uyazi ukuba igqibelele Uhlalutyo lwePCB DFM izixhobo ziya kuhlala zikunika ingxelo efanelekileyo. Ukongeza, ngokujonga le ngxelo, unokutshintsha ngokulula uyilo lwakho lwePCB.
Zeziphi izakhono ezibalulekileyo esinazo Uhlalutyo lwePCB DFM iinjineli ziye?
Iinjineli zethu zeengcali zinobungcali obuphezulu kwaye banezakhono. Ukongeza, banezakhono ezifanelekileyo zokucombulula yonke imiba enxulumene nayo
● Uyilo lweMveliso
● Ubume bePCB kunye noyilo
● Uyilo lweesekethe zombane
● Uyilo lwePakethe ye-Elektroniki
● UkuBopha kunye noyilo lweeCable.
Ayisiyilo loyilo kuphela kodwa banezakhono ezifanelekileyo kwi.
● Uvavanyo lobunjineli
● Ubunjineli beCandelo
● Ubunjineli bokuThengisa
● Ubunjineli boMatshini.
Kutheni yethu Uhlalutyo lwePCB DFM inkonzo ibalulekile?
Ngokwenyani, kukho umahluko omkhulu phakathi koqwalaselo zombini, umzekelo,
Ing ukuyila kwiscreen;
√ ukuyila imveliso lokugqibela.
Ngapha koko, oko akuthethi ukuba uyilo oluya kugqibela kwiscreen sekhompyuter kufuneka lwenze ngokuchanekileyo emva kokwenza. EyethuUhlalutyo lwePCB DFM Iqela linamava amakhulu ekuchongeni le miba ibalulekileyo ilandelayo,
● imaski ye-solder;
● ububanzi bomgca;
Ngapha koko, iinjineli zethu zeengcali zinokukunceda ukuba uphonononge ngokunzulu izinto ezibalulekileyo zenkqubo yokuvelisa. Ke, ezona zinto zixhaphakileyo ezingena ngaphakathi kuyilo ngenjongo yokuvelisa ngokufanelekileyo zezi zilandelayo,
Ukuphazamiseka kwamaza erediyo
Awareness Ukwazisa ngomhlaba nolwakhiwo
Izithintelo ezivela ngaphandle.
Silelona qela libalaseleyo kwaye sinomdla omkhulu wokusombulula zonke zakho PCB ukuyilaimiba. Ngaphezu koko, sinabasebenzi abanamava abayili abanobuchule kunye neenjineli.
Ke, ngokufumana ixabiso lethu Uhlalutyo lwePCB DFM iinkonzo, ungaqhuba uye kwimpumelelo enkulu kwi-DFM yakho ye-PCB.